Ra’iisul Wasaare Rooble oo sheegay in dalku galay xaalad Bani’aadaminimo oo Adag. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ra’iisul Wasaare Rooble oo sheegay in dalku galay xaalad Bani’aadaminimo oo Adag.
Muqdisho(Halqaran.com) –Ra’iisul Wsaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhawaaqay in dalku galay xaalad bani’aadminimo oo deg deg ah oo ka dhalatay abaaraha dalka ku sii baahaya, ka dib marki uu guddoomiyay shir aan caadi ahayn oo Golaha Wasiirradu ka yeesheen xaaladda abaaraha.
“Maanta oo ay Taariikhdu tahay 23 November 2021 kadib markaan dhageestay warbixintii ay soo diyaariyeen gudigii aan u magacaabay xaaladda abaaraha dalka taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo ay keenen abaaruhu sidaas darted, waxaan Ku dhawaaqayaa in uu dalku galay xaalad Deg deg ah oo bini’aadanmino loona baahanyahay gurmad deg deg ah gudaha iyo dibadaba” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble.
Qaramada Midoobay ayaa tododbaadkan sheegtay inay abaartu saamaysay 80% waddanka kadib markii saddex xilli oo isku xigta la waayey roobabkii.
Hay’adda Cuntada iyo Beeraha ee FAO ayaa ka digtay in xaaladda abaaruhu kasii dari doonaan bisha December ee soo socota iyo saddexda bilood ee ugu horreeya sannadka 2022-ka.
Abaarta ayaa la sheegayaa inay si daran ugu dhufatay gobollada Koonfurta iyo Bartamaha dalka. Meelaha sida aad ah ay u saamaysay waxaa ka mid ah gobollada Jubada Hoose, Gedo, Hiiraan, Bay iyo Bakool iyo gobollo kale.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa dadka Soomaaliyeed iyo dunida ugu baaqay in deg deg loogu soo gurmado Shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen.